Viticulture | Tantsaha anaty aterneto | November 2019
Inona no iraisan'ny lohataona amintsika? Voalohany indrindra, miaraka amin'ny voankazo, legioma ary voankazo. Ary inona no tsy mety amin'ny lohataona? Mazava ho azy, afaka mandeha any amin'ny fivarotana ianao ary mividy ilay kishmish fotsy malaza, saingy mbola afaka mitombo ny voaloboka ao amin'ny teti-bola. Amin'izay fotoana izay dia ho azonao antoka tanteraka ny maha-ara-dalàna anao sy hankafizanao ny tsirony lehibe.
Famaritana ny endriky ny grapes "Transformation"
Amin'izao fotoana izao dia maro be ny karazam-boalobok'ireo karazan-trondro ary samy manana tombony sasantsasany, izay ahazoan'izy ireo ny fitiavan'ny mpamboly. Anisan'ireo karazany vaovao izay tsy mbola tafiditra ao amin'ny rejisitry ny varin'ny karazam-boalaza, ny "Transformation" dia manamarika indrindra. Ny tombony lehibe dia ny fahafahana mitondra tsara sy avo lenta tsy any amin'ny faritra atsimo ihany, fa any amin'ny faritra misy toetr'andro.
Karazana voaloboka "Kodryanka"
Ny karazam-boaloboka rehetra dia manana ny toetrany miavaka, izay tian'ny mpamboly azy. Tsy ny toetra sy ny haben'ny clusters ihany no mahakasika azy io, fa ny zoning, ny fitomboana, ny fitrandrahana sy ny fandroahana ary ny fitsipika momba ny fambolena sy fiahiana. Momba ireo toetra ireo ny karazana vary "Codreanca", izay heverina ho karazana voalohandohany, ary hilaza aminao etsy ambany.
Karazana voaloboka "Laura"
Ny karazam-boaloboka antsoina hoe "Laura" dia efa ela no mpankafy fambolena maro. Ny cluster dia tena tsara tarehy ary nasaina nesorina tao amin'ny sampan'ny kirihitra ary nanandrana avy hatrany. "Laura" dia iray amin'ireo karazana voankazo amber, izay matetika no hita eny an-tsena sy trano fatoriana.
Karazana voalavo "Kesha"
Tena sarotra ny mihaona amin'ny olona iray izay tsy miraharaha ny voaloboka. Na dia ireo mponina any atsimo aza, izay toa vaky noho ny habetsaky ny karazan-java-bozaka mahavariana, dia mbola tsy miraharaha azy ireo. Saingy, na dia eo aza ny fahaverezan'ny any atsimo, na izy ireo na ireo mponina any amin'ny faritra hafa, dia mankasitraka io karazana voaloboka io tahaka an'i Kesha.
Ny karazana voankazo "Arcadia"
Ny karazana voankazo "Arcadia" dia efa lasa lava-bidy tena izy sy ny tanimboalobony lehibe. Io karazany io dia mendrika ny fitiavan-tanimiham-bozaka manerana izao tontolo izao, tsy noho ny toetry ny vokatra avo lenta ihany, fa noho ny fanoherany avo lenta loatra amin'ny toetr'andro sy ny fiverenana mora any amin'ny faritra samihafa.
Ny karazana voankazo "Moldavia"
Anisan'ireo mpankafy voaloboka maitso, angamba, tsy hisy ireo izay tsy nandre momba ny karazana Moldavia. Io voaloboka io dia tsotra indrindra, izay tena tiany ny mpamboly mpihinana. Manana fanoherana avo lenta sy fikarakarana tsy maotina izy. Na dia eo aza ny karazany dia tsy manana cluster sy beza goavam-be, mbola manintona ny fiheverana ny vokatra mahavariana tsy dia mety.
Ny karazana vary "Monarch"
Maro ny karazam-boaloboka misy bozaka lehibe sy be. Na dia manana fahaiza-manao isan-karazany aza ny sasany, dia mety hahatratra ny fahombiazany tsy misy toa azy ny mpamboly voaloboka. Saingy, raha ny karazana voaloboka amin'ny Monarch, dia tsy ilaina ny ezaka manokana. Na izany na tsy izany, na dia eo aza ny haben'ny volombavan'ny voaloboka, ny volon'ity hazofijaliana ity dia mahatratra fotsiny ny habe.
Ny voaloboka dia tena be vilona ary mahasoa. Ankoatra izany, eo anivon'ireny karazany ireny dia afaka mahita karazany maro samihafa, fa koa loko, endrika ary loko. Fa ho an'ny divay maro, ny tena zava-dehibe indrindra dia ny vanim-potoan'ny voankazo. Ity zava-dehibe ity dia tena manan-danja tokoa ho an'ny faritra manana toetr'andro mahafinaritra, izay mety tsy hanam-potoana hananana ny varotra.
Karazana vary "Cardinal"
Any amin'ny faritra atsimon'i Okraina sy Rosia maoderina, ny gnou dia heverina ho iray amin'ireo karazana fambolena fahiny. Angamba noho izany, ity zavamaniry ity ankehitriny dia lasa sarobidy amin'ny fitomboan'ny olona rehetra. Eny tokoa, sarotra ny mahita sehatra tsy miankina, tsy voaravaka amin'ny ala mikitroka.
Karazana voaloboka "Isabella"
Indraindray, toa tsy zava-dehibe ny fitomboan'ny tanimboaloboka, satria kolontsaina tsy dia mendrika loatra izany. Saingy, raha te haka voaloboka voaloboka tsara ianao dia mila mifankazatra amin'ny fepetra momba ny fambolena sy fiahiana azy ireo. Ny voaloboka ao "Isabella" dia tsy vitan'ny hoe tsara tarehy, fa tena tsara tarehy.
Karazana vary "Amur"
Ny fanangonam-bokatra dia efa nanjary ny fananan-tany fa tsy ny tanimboalobok'i atsimo ihany, fa ireo tranokalam-ponenana avy any amin'ireo faritra tena mangatsiaka ao avaratr'i Rosia ihany koa. Saingy maro no gaga fa misy karazana voajanahary voajanahary izay hitan'ny mpahay siansa ary ampiasaina amin'ny fiompiana an-tsitrapo ankehitriny ho mpanome fanoherana avo lenta.
Ny karazana gravy "Anniversary of Novocherkassk"
Ny fambolena sy fiompiana karazam-boaloboka vaovao dia efa nampiharina nandritra ny an'arivony taona ho an'ny matihanina, toy ny mpankafy tsotra. Noho ny hafanam-pon'izy ireo sy ny ezaka maro natao nandritra ny taona maro, maro ireo karazam-bozaka no efa noforonina izay afaka manome fahafinaretana ny gourmet. Ny iray amin'ireo vokatry ny fanandramana mpilalao, izay malaza indrindra amin'izao fotoana izao, dia ny voalobok'i Novocherkassk Anniversary.
Karazana voaloboka "Lydia"
Ny karazam-boaloboka technique malaza indrindra ampiasaina amin'ny famokarana dia ny "Isabella" sy "Lydia". Mandritra izany fotoana izany dia mijanona ao amin'ny aloka ihany ny tarika faharoa, satria mitovitovy amin'ny Isabella izy, ary matetika izy ireo no antsoina hoe "Pink" na "Red Isabella." Na izany aza, ny voaloboka "Lydia" dia manana ny toetoetrany manokana, izay nankafiziny divizera maro ho mpilalao am-pirahalahiana ary toy ny voaloboka ho an'ny fampiasana ny latabatra, ary ho toy ny orin-javamaniry.
Karazana voaloboka "Anyuta"
Maro aminay amin'ny faniriana lehibe no hampitombo ny zaridaina samihafa amin'ny trano fatorianay. Matetika anefa isika dia tsy afaka manokana fotoana ampy fotsiny hikarakarana azy ireo. Ny safidy tsara indrindra amin'ity tranga ity dia ny safidy amin'ny karazany, izay mitovy sy tsy mitaky be loatra.
Karazana voaloboka "Ataman"
Ny grapes amin'izao andro izao dia nitsahatra tsy hafahafa na tsy azo idirana. Misy karazany maro an'io zavamaniry io, izay samy hafa amin'ny an'ny hafa, na amin'ny endrika ivelany na amin'ny tsiro. Iray amin'izy ireo i Ataman. Andao horesahina amin'ny antsipiriany bebe kokoa. Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny esperanto Ohatra tsy ampy amin'ny teny esperanto
Ny karazana vary "Sensation"
Na firy na firy ny karazam-boaloboka, samy manana ny maha-izy azy ny tsirairay. Ity ihany koa dia mahakasika ny toetoetry ny fivoaran'ny voaloboka, sy ny fanoherany ny bibikely isan-karazany ary, mazava ho azy, ny toetran'ny voankazo. Noho ny karazam-boalaza isan-karazany dia misy afaka misafidy izay tena manintona azy.
Karazana voalavo "Veles"
Ireo izay maniry ny hitombo ao an-trano na any amin'ny toeram-piompiana dia matetika mandany fotoana betsaka mba hahitana ny karazana tsara indrindra ho an'ny tenany. Ary izy ireo dia noho izany antony izany: tsara kokoa ny mandany andro maromaro amin'ny famakafakana ny habaka aterineto noho ny fametrahana ny akorandriaka voalohany ary taorian'ireo taona vitsy lasa izay. Ireto manaraka ireto no tianay hampahafantarina anao amin'ny an-tsipiriany amin'ny iray amin'ireo karazam-boaloboka mahavokatra indrindra sy mahavokatra, izay mety tsara amin'ny fampiroboroboana toeram-ponenana - Veles grapes.
Karazana vary "Halachi"
Ny kolontsaina grape dia efa fantatra hatramin'izay nahasalama sy nanan-karena azy. Ankoatra izany, ny voalobony tsara amin'ny fahavaratra dia manome alokaloka mafana sy malefaka ary manampy amin'ny famoronana fiadanana sy fampiononana eo akaikin'ny trano. Mba hanamboarana voninkazo mendrika sy tsara tarehy, ilaina ny mamaritra ny karazana, izay toerana mety indrindra.
Karazana voaloboka "Aleshenkin"
Ny karazam-boaloboka amam-bozaka dia miavaka amin'ny tsiro mahafinaritra sy ny bika mahafinaritra. Tsy azo atao ny mandalo cluster efa mihetsiketsiky ny masaka tsy manisy zezika ao am-bavanao. Ary ny loko amber sy ny tsirony mahatalanjona amin'ny beza be "Alyosha" dia tsy hamela na iza na iza tsy hiraharaha. Famaritana varieties "Aleshenkin" dia azo jerena eo ambanin'ny anarana hoe "Alyosha" na "No. 328".
Varimbazaha grape "Victoria"
Na inona na inona fahasamihafan'ny karazam-boalobokay izay mety hivoatra amin'ny toetry ny firenentsika, na izany aza, samy manana ny biby fiompinay avokoa ny tsirairay amintsika. Raha mpankafy karazan-tsakafo manankarena ianao, aleonao ny karazana voaloboka mavokely ary maniry ny haniry tsimokaretina goavam-be, dia misafidy malalaka hisafidy ny voalobok'i Victoria.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Viticulture